सैनिक हमलाकाे घटनापछि सलमानले पाकिस्तानी गायक आतिफ असलमलाई दिएकाे गीत फिर्ता गरे « News24 : Premium News Channel
सैनिक हमलाकाे घटनापछि सलमानले पाकिस्तानी गायक आतिफ असलमलाई दिएकाे गीत फिर्ता गरे
प्रकाशित मिति : Feb 20, 2019
एजेन्सी । जम्मू कश्मीरको पुलवामा आतंकबादीले भारतिय सैनिकमाथि गरेको हमलापछि सिङ्गोे भारत यतिबेला पाकिस्तानको बिरोधमा उत्रिएको छ । पाकिस्तान प्रतिको आक्रोशको आगो साधारण मानिसमा मात्र सिमित नरही बलिउड सेलिब्रिटीहरुमा समेत दन्किएको छ ।
यस्तैमा अभिनेता सलमान खानले आउँदो आफ्नो फिल्ममा गीत गाउन पाकिस्तानी गायक आतिफ असलमलाई साइन गरेका थिए । तर पुलवामामा भएको हमला पछि उनले आतिफलाई आफ्नो फिल्मबाट हटाइदिएका छन् । सलमान यो फिल्मको प्रोड्यूसर पनि हुन् त्यसैले अब उनले यस फिल्मलाई आफैले गाउने भएका छन् ।
पुलवामा हमलापछि बलिउड पाकिस्तानी कलाकारहरुको बिरोधमा उत्रिएको छ । यस अघि भारतीय प्रख्यात टीसीरीज म्यूजिक कम्पनीका मालिक भूषण कुमारले भ्यालेन्टाइन डेमा रिलीज भएको आतिफ असलमको गीतलाई अनलिस्ट गरेका थिए । जबकि पाकिस्तानी कलाकार अस्लमको गीतलाई हटाएकोमा चौतर्फी तारिफ गरिएको छ ।
पुलवामा हमला पछि निकै भावुक बनेका सलमानले सामाजिक संजालमा लेखेका थिए ‘देश भक्तीकोे लागि आफ्नो ज्यान दिने सैनिक जवानको विरताले मेरो मन रोएको छ ।जसले हाम्रो परिवारको सुरक्षाको लागि आफ्नो ज्यानको बलिदान दिए ।’यस अघि सलमानकोे संस्था बिइंग ह्युमन फाउन्डेसनले पनि शहीद परिवारलाई सहयोग गरेको छ ।त्यस्तै उनको आउँदो फिल्म नोटबुकको तर्फबाट पनि परिवारलाई थप मद्दत गर्ने सलमानले बताएका छन् ।
सेलेना गोमेज र बिल मुर्रेको विवाहको कुरा कथा ‘स्पोइलर’ मात्र
सरोगेसीबाट बुबा बन्दैछन् सलमान खान ? भन्छन्, ‘बच्चा चाहन्छु’
विवेकले शेयर गरे ऐश्वर्याको ट्रोल, सोनमको प्रतिक्रिया -‘घटिया’
मनाङेकाे फिल्म ‘पोइ पर्‍यो काले’ काे शुभ मुहूर्त, अकाश र पूजासंगै तीन जाेडीकाे अभिनय
यमन माझी स्टारर् ‘मोङो डोङा–२’ रिलिज मिति तोकियो
कान्सकाे ‘वल्र्ड पिस नाइट’ मा सहभागी भइन् अभिनेत्री कार्की
एक वर्षसम्म मोबाइल फोन वा ट्याबलेट चलाउन नपाइने प्रतियोगिता !
access_time 10:00 pm
तेश्रो यु–१६ राष्ट्रिय पुरुष बास्केटबल प्रतियोगिता– कीर्तिपुर र ग्रेट माया सेमिफाइनलमा
दोश्रो उपराष्ट्रपति कप चिल्ड्रेन गेम्स– छनौट भए ८ खेलाडी
एजेन्सी । हिजो–आज मोवाइल विना मानिस बाँच्नै सक्दैन कि भन्ने लाग्छ । स्मार्ट फोनको प्रयोग
काठमाडौं । कीर्तिपुर र ग्रेट माया तेश्रो यु–१६ राष्ट्रिय पुरुष बास्केटबल प्रतियोगितामा बुधबार सेमिफाइनलमा प्रवेश
काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आयोजनामा हुने दोश्रो उपराष्ट्रपति कप चिल्ड्रेन गेम्सका लागि प्रदेश ३